Ihowuliseyili 4.5mm non-isiliphu nqakraza nokwadala IVinyl Spc-2 yoMvelisi kunye Supplier | Moyo
I-4.5mm engatyibilikisi icofa IVinyl Spc-2
Umgangatho oqinileyo we-vinyl flooring, owaziwa ngokuba yi-SPC flooring, ngowona khetho olumanzi olungenawo amanzi kwi-market. Uyayazi indlela i-vinyl edume ngayo ngokuba bhetyebhetye kwaye ungaphantsi ...
Umgangatho oqinileyo we-vinyl flooring, owaziwa ngokuba yi-SPC flooring, ngowona khetho olumanzi olungenawo amanzi kwi-market.
Uyazi indlela i-vinyl enedumela lokuguquguquka kwaye yomelele kancinci kunemithi yemveli okanye i-laminate? Ewe, i-WPC vinyl intle yomelele, kodwa i-SPC engqongqo yomgangatho we-vinyl flooring ifana nokuma kwikhonkrithi.
Lo mgangatho mncinci, ubhityileyo ungabonakala ngathi awunanto ingako kuwo, kodwa ngowona unzima kunene, owenzelwe ngokukodwa ukumelana nokusetyenziswa gwenxa kweendawo zorhwebo.
Njenge-WPC, i-SPC yomgangatho oqinileyo womgangatho we-vinyl ungaphezulu komgca wokungasebenzi kuphela kodwa kujongeka, ngokunjalo. Nge-vinyl engqongqo engqongqo, uya kubona zonke iinkuni ezishushu kakhulu kunye nokujongeka kwamatye kunye nemibala kwiiplanga ezintle, ezikholisayo kunye neethayile.
Umgangatho oqinileyo we-SPC we-vinyl flooring uqulethwe ngamanqanaba amane.
Iyahluka phakathi kwabavelisi.
Umaleko oxhasayo: Lo ngumqolo weplanki yakho.
Umxholo we-SPC: Lo yeyona nto inomtsalane! Umgangatho we-SPC uqulethe undoqo oqinileyo, ongenawo manzi we-WPC. Ayizukugqabhuka, idumbe okanye ipeel nokuba ululwelo oluninzi kangakanani. Lo mqobo u-ultra-dense ngaphandle kweearhente ezinamagwebu njengoko uza kuzifumana kumgangatho wendalo weWPC. Ikunika ukomelela okuncinci ngaphantsi, kodwa yenza ukuba ukugqwesa kungoyena mkhulu kwisebe lokomelela.
Uluhlu lweVinyl eprintiweyo: Kulapho ufumana khona umfanekiso wakho omnandi owenza ukuba i-vinyl ijongeke (phantse) ifane nezinto zendalo ezinje ngamatye kunye neenkuni. Rhoqo, isiseko se-vinyl esisezantsi esinexabiso eliphakamileyo yeyona vinyl ikumgangatho ophezulu kwintengiso. Oku kuthetha ukuba ufumana ezona nkangeleko zinokuthenjwa eziza kufungiswa ngabantu ziinkuni / ilitye lokwenyani!
Nxiba i-Layer: Kanye njenge-vinyl yesiko, umaleko wokunxiba unje ngomlindi wakho; iyanceda ukukhusela umgangatho wakho kwimingxunya, ukukrwela, njl njl. Umgangatho we-SPC waziwa ngokuba ne-buff, i-beefy layer layer enikezela ukhuseleko ngakumbi. Xa ujonga i-vinyl flooring, injalo (ukuba ayibikho ngaphezulu) kubalulekile ukujonga ubukhulu bokunxiba njengobungakanani beplanki.
Imveliso SPC Cofa nokwadala
Ukutyeba I-3.5mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0mm, yenziwe ngokwezifiso
Wearlayer I-0.1 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 0.7MM
Ukuthotyelwa I-EVA / IXPE 1.0 / 1.5MM / 2.0MM
Ubukhulu: 7 "* 48 '', 6" * 36 '', 9 `` * 60 '', 12 * 12 * 12 * 24,24 * 24, wena
Uluhlu Ingqolowa yeenkuni / ingqolowa yemarmore / ingqolowa yekhaphethi
Umphezulu I-Embossor yokuKhanya, i-Embossor enzulu, ukukrwela ngesandla, i-Plain, ifuthe.
Isiqinisekiso Iminyaka engama-20 yokuhlala, iminyaka eli-15 yeNtengiso
Inkqubo yokutshixa Uniclick
Imibala Ngaphezulu kwama-3 hundrends .pls asibuze ukuba uyafuna ukubona ngaphezulu.
Egqithileyo 4mm waterprooof spc ukutyibilika umenzi
Okulandelayo: I-5.0mm yomlilo ucofe umlilo kumzi-mveliso
I-5.0mm yomlilo ucofe umlilo kumzi-mveliso
Umatshini wokusika umatshini we-Vinyl